अब देशभर लम्ब्याइँदै निषेधाज्ञा, कुन जिल्लामा कहिलेसम्म ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार अब देशभर लम्ब्याइँदै निषेधाज्ञा, कुन जिल्लामा कहिलेसम्म ?
अब देशभर लम्ब्याइँदै निषेधाज्ञा, कुन जिल्लामा कहिलेसम्म ?
हाल देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश जिल्लामा यही असार १४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ ।
डडेलधुरा, स्याङ्जा, बैतडी, सिरहा र मुस्ताङमा असार १५, पर्सामा असार १३, पाल्पा, दार्चुला र गोरखामा असार १२, धनकुटामा असार ११, सुर्खेत, चितवन, सल्यान, रुकुम पश्चिम, प्युठान, दैलेख, डोटी, रोल्पा, मुगु, हुम्ला, लमजुङ, भोजपुर र रुकुम पूर्वमा असार १० गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ ।
यस्तै, रामेछापमा असार ९, दाङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र संखुवासभामा असार ८ गतेसम्म निषेधाज्ञा छ । केही जिल्लामा आजसम्म निषेधाज्ञा कायम छ । ती जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा थपिन सक्छ । बारा र सप्तरीमा भने अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ ।
Previous articleसेनाका जवानले व्यारेकभित्र आफैलाई गोली हाने, हालत एक्दम गम्भिर,आखिर किन हाने अफैलाइ गोलि
Next articleखाने तेलको मूल्य घट्यो,यति घट्यो हेर्नुहोस